January 3, 2022 - Channel Lover
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရြတ္နဲ့ အဆီဖုတြေကြာင့် စိတ်ညစ်နေရရင်
January 3, 2022 by Channel Lover
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် Hello မလှချင်တို့ရေ ဒီကမလှချင်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ရအောင် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပီးရင် အတူတူလှကြတာပေါ့​ It’s skin care time!!! ဒီတစ်ပတ်တော့ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တင်းတိပ်တွေ ထွက်နေတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ရှိနေတယ် အဆီဖုတွေ ဖြစ်နေတယ် အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေ ရတယ် ဘာလုပ်ရမလဲ??? အကြံဉာဏ်ပေးပါဦး တင်ပေးပါဦး ဆိုသူတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အကုန် အကျသက်သာတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းနီးလေးကို ယူဆောင်လာပါပြီ…. ဒါကတော့ Potato Mask (အာလူးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းခြင်း) ပါပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းက အာလူးတစ်မျိုးတည်းလား ? Yes – အာလူးတစ်မျိုးတည်းပါပဲ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုပြီးထိရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတော့ … Read more
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မြင်ရမယ့် ဥက္ကာမိုး (သို့) ကြယ်မိုးရွာခြင်း ဖြစ်စဉ်
လွတ်လပ်​ရေး​နေ့ကို ကြိုမည့် ​လေးစိတ်ပိုင်း ဥက္ကာမိုး ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံး ခပ်များများကြွေမည့် ကြယ်​ကြွေခြင်း ဖြစ်စဉ်ဟာ Quadrantid Meteor Shower (​လေးစိတ်ပိုင်း ဥက္ကာမိုး) ဟု ​ခေါ်ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် နဲ့ ၄ ရက် နံနက်ခင်းပိုင်းမှာ အများဆုံး မြင်​တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အ​ရှေ့​မြောက်ဘက် ​ကောင်းကင်ယံမှ ဓူဝံကြယ် နဲ့ ခုနှစ်စဉ်ကြယ်တို့ အနီး (​အောက်ဘက်နား) က Bootes ကြယ်တာရာ နဲ့ Draco ကြယ်တာရာ အကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ် (ပုံ)။ မြန်မာ့နက္ခတ်မှာ​တော့ သွာတိနက္ခတ် (သွာတိကြယ်​ပြောင်) Arcturus အနီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်​ကြွေတယ်ဆိုတာ အာကာသအတွင်းက ဥက္ကာခဲ ဥက္ကာမှုန်များနဲ့ ကမ္ဘာ့​လေထုတို့ ပွတ်တိုက်မိရာမှ … Read more
ခဈြသူလေးနဲ့ တရားဝငျစစေ့ပျလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို ဗီဒီယိုလေးဖွငျ့ အသိပေးလိုကျတဲ့ သန်တာဗိုလျ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ကောင်းပြည့်နဲ့ သန္တာဗိုလ်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းကိုချစ်ကြပြီး နှစ်တွေအကြာကြီး လက်တွဲခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အနုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့အတွဲလေးကို ကြည့်ပြီး အားကျနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က သန္တာဗိုလ်ရဲ့ Facebook Story တွင် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ချစ်သူလေးနဲ့ တရားဝင်စေ့စပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ဗီဒီယိုလေးဖြင့် အသိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လတ်တလောမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မန္တလေးမြို့ကို ရောက်ရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သန္တာလှိုင်တို့အတွဲလေးရဲ့ စေ့စပ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြောမပြတတ်အောင် ဝမ်းသာနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ zawgyi … Read more
ခုချိန်ထိ လိုင်းပေါ်မှာ သောက်ချိုးမပြေတာတွေတင်နေတဲ့ သူတွေသိအောင် ရှဲပေးလိုက်ကြပါဗျ….
မယ့်ကုတ်ကင်း နွားခြံထဲက တိုင်းရင်းသားစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ ညစာ… ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများရဲ့ ရိက္ခာများဖြင့် ကျွေးမွေးနေတဲ့ မယ့်ကုတ်ကင်းနွားခြံထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ ညစာ… ခုချိန်ထိ လိုင်းပေါ်မှာ သောက်ချိုးမပြေတာတွေတင်နေတဲ့ သူတွေသိအောင် ရှဲပေးလိုက်ကြပါဗျ Video ye min.aac unicode မယျ့ကုတျကငျး နှားခွံထဲက တိုငျးရငျးသားစဈဘေးရှောငျတှရေဲ့ ညစာ… ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျသားမြားရဲ့ ရိက်ခာမြားဖွငျ့ ကြှေးမှေးနတေဲ့ မယျ့ကုတျကငျးနှားခွံထဲကစဈဘေးရှောငျတှရေဲ့ ညစာ… ခုခြိနျထိ လိုငျးပျေါမှာ သောကျခြိုးမပွတောတှတေငျနတေဲ့ သူတှသေိအောငျ ရှဲပေးလိုကျကွပါဗြ Video ye min.aac မယ့်ကုတ်ကင်း နွားခြံထဲက တိုင်းရင်းသားစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ ညစာ… ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများရဲ့ ရိက္ခာများဖြင့် ကျွေးမွေးနေတဲ့ မယ့်ကုတ်ကင်းနွားခြံထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ ညစာ… ခုချိန်ထိ လိုင်းပေါ်မှာ သောက်ချိုးမပြေတာတွေတင်နေတဲ့ သူတွေသိအောင် ရှဲပေးလိုက်ကြပါဗျ unicode မယျ့ကုတျကငျး နှားခွံထဲက တိုငျးရငျးသားစဈဘေးရှောငျတှရေဲ့ ညစာ… ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျသားမြားရဲ့ … Read more
တွံတေးမှာ အိမ်စီးကားတစ်စီး ငါးမွေးကန်ထဲထိုးကျ၊ ကားပေါ်ပါသူ ၅ ဦး သေဆုံး
တှံတေးမှာ အိမျစီးကားတဈစီး ငါးမှေးကနျထဲထိုးကြ၊ ကားပျေါပါသူ ၅ ဦး သဆေုံး ရနျကုနျတိုငျး၊ တှံတေးမွို့နယျက ခြောငျးဟောငျးကြေးရှာအနီးမှာ မနေ့ ဇနျနဝါရီလ ၂ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးတုနျးက အိမျစီးကားတဈစီးဟာ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ငါးမှေးကနျထဲ ထိုးကပြွီး နဈမွုပျခဲ့တာကွောငျ့ ကားပျေါပါလာသူတှထေဲက ၅ ဦး အသကျဆုံးပါးခဲ့တယျလို့ လိုကျပါကူညီပေးခဲ့တဲ့ပရဟိတအသငျးက ပွောပါတယျ။ ”ယာဉျမောငျးကတော့ လှတျမွောကျခဲ့တယျ။ ကားပျေါပါလာသူ အမြိုးသမီး ၄ ဦးနဲ့ ကလေး ၁ ဦး ရမှေနျးပွီး ဆုံးပါတယျ။ အမြိုးသမီး ၃ ဦးကတော့ ကြှနျတျောတို့ ကယျဆယျရေးအဖှဲ့ရောကျခြိနျမှာ အသကျမမီတော့ဘူး။ နောကျ အမြိုးသမီး ၁ ဦးနဲ့ ကလေး ၁ ဦးကိုလညျး အရေးပျေါပွုစုနညျးတှေ၊ အောကျစီဂငျြတှပေေးခဲ့ပမေဲ့လညျး အသကျမကယျနိုငျခဲ့ဘူး။ တှံတေးဆေးရုံရောကျတော့ အသကျမပါတော့ဘူး” … Read more
ကရင်နှစ်(၂၇၆၁) နှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူး တွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီဒုံ
သမ္မတတော့ မရဘူးဟေ့ ကြိုးစင်ကိုသာ ဂျောင်းတော့ ဂျောင်းတော့ ကေအဲန်ယူ-ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည် ကရင်နှစ်(၂၇၆၁) နှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူး တွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီဒုံး အဖွဲ့၏ စာသားအချို့ကို ဖေါ်ပြ ပေးအပ်ပါသည်။ ဒုံးအပြည့်အစုံကို ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။ #KloFM unicode သမ်မတတော့ မရဘူးဟေ့ ကွိုးစငျကိုသာ ဂြောငျးတော့ ဂြောငျးတော့ ကအေဲနျယူ-ကော့ကရိတျမွို့နယျတှငျ ကငျြးပခဲ့သညျ ကရငျနှဈ(၂၇၆၁) နှဈ ကရငျနှဈသဈကူး တှငျ ဖြျောဖွခေဲ့သညျ့ ဒီမိုကရစေီဒုံး အဖှဲ့၏ စာသားအခြို့ကို ဖျေါပွ ပေးအပျပါသညျ။ ဒုံးအပွညျ့အစုံကို ဆကျလကျတငျပေးသှားပါမညျ။ #KloFM သမ္မတတော့ မရဘူးဟေ့ ကြိုးစင်ကိုသာ ဂျောင်းတော့ ဂျောင်းတော့ ကေအဲန်ယူ-ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည် ကရင်နှစ်(၂၇၆၁) နှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူး တွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီဒုံး အဖွဲ့၏ … Read more
အထူးသတိထားသင့်တဲ့လေမဖြတ်ခင်ပြသလေ့ရှိတဲ့လက္ခဏာများ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးသွားလာမှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အခါ လေဖြတ်မဲ့ အရိပ်အယောင်လက္ခဏာများ ပေါ်လာတတ်ပါတယ် အဲဒီလက္ခဏာများက မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ ကြာမြင့်ပြီး သွေးသွားလာမှု ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပါက ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းကို လေဖျန်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အသေးစားလေဖြတ်ခြင်းလို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ လေမဖြတ်ခင် ကြိုတင်သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာများကတော့… မျက်နှာ၊ လက်၊ ခြေတစ်ဖက် ရုတ်တရက်ထုံခြင်း၊ လေးလံခြင်း ရုတ်တရက် စကားပြောမရခြင်း၊ ပြောသောစကားကို နားမလည်ခြင်း၊ စကား ဗလုံးဗထွေးဖြစ်ခြင်း ရုတ်တရက် အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း ရုတ်တရက် လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ခြင်း၊ ဒယီးဒယိုင် ဖြစ်ခြင်း ရုတ်တရက် မူးဝေခြင်း ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း အဲဒီအချိန်အတွင်း စနစ်တကျကုသမှု မခံယူပါက လေဖြတ်ခြင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ unicode အထူးသတိထားသငျ့တဲ့လမေဖွတျခငျပွသလရှေိ့တဲ့လက်ခဏာမြား ဦးနှောကျအတှငျး သှေးသှားလာမှု ခတ်ေတရပျဆိုငျးသှားတဲ့အခါ လဖွေတျမဲ့ … Read more
မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ စမုံတုန်းမယ့် နေ့ရက်ကို အတိအကျပြောလိုက်တဲ့ နက္ခတ္တဗေဒကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့်စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ ပျက်စီးကိန်းကြုံလိမ့်မည်ဟု နက္ခတ္တဗေဒကျွမ်းကျင်သူက ဟောကိန်းထုတ်၊ မန္တလေးမဟာသင်္ကြန်စာက မင်းရာဇာနှင့် မိဖုရားအပေါင်း အန္တရာယ်ကျမည်ဟု ဖော်ပြ လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစတင်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့်စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များ ပျက်စီးကိန်းကြုံရလိမ့်မည်ဖြစ် ကြောင်း နက္ခတ္တဗေဒကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည်။ ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ်သည် ဂြိုလ်သဘောတရားများအရ အလွန်ထူးခြားသော နှစ်ဖြစ်ပြီး အပြောင်း အလဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၏ ဂြိုလ်များ ရပ်တည်မှုသည် အလွန်ထူးခြားကြောင်း ပြောဆိုသည်။ “၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ကစပြီး စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ အထူးမြင့်မားလာပြီး၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တိုက်ပွဲများ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ လဆန်းမှ လလယ်အထိဟာ စစ်ကောင်စီတပ်များ … Read more
ကားတစ်စီးလုံးကို နေအိမ်တစ်လုံးလို စိတ်တိုင်းကျအောင် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး သားသမီးနှင့်ဇနီးတို့ကို နိုင်ငံအနှံအလည်အပတ်လိုက်ပို့ပေးခဲ့သည့်ဖခင်
လောကရှိလူသားတိုင်းဟာ မိမိ၏စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွင်စေမည်ထင်သော အရာများကိုသာ ဂရုတစိုက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ၏အလုပ်အကိုင်များနှင့် နေသားကျအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ရသော်လည်း ပျော်ရွင်ဖွယ်ကောင်းသောအချိန်အလာများရရှိနိုင်ပေမယ့် ဖခင်တစ်ဦးအတွက်တော့ မိသားစုကို အချိန်ပေးခြင်းလောက် ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုတွင်လည်း အသက်၃၁နှစ်အရွယ်ရှိ မစ္စတာဖန်ခါ့ထရွန်ဆိုသည့် အမျိုးသားဟာ ထရပ်ကားတစ်စီးလုံးကို စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးပြီး အိမ်တစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် အမျိုးသားဟာ သားသမီးလေးတို့နှင့်အတူ နိုင်ငံအနှံကို အလည်အပတ်ခရီးထွက်စေပြီး မိသားစုကို အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အလည်အပတ်ခရီးထွက်ပြီးလျှင်လည်း ကားကိုကော်ဖီဆိုင်လေးအနေဖြင့် ရောင်းချနိုင်အောင် တစ်ခါတည်းဖန်တီးတည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ Unicode လောကရှိလူသားတိုငျးဟာ မိမိ၏စိတျခမျြးသာပြျောရှငျစမေညျထငျသော အရာမြားကိုသာ ဂရုတစိုကျဖွငျ့ လုပျဆောငျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ မိမိ၏အလုပျအကိုငျမြားနှငျ့ နသေားကအြောငျ ကွိုးစားနထေိုငျရသျောလညျး ပြျောရှငျဖှယျကောငျးသောအခြိနျအလာမြားရရှိနိုငျပမေယျ့ ဖခငျတဈဦးအတှကျတော့ မိသားစုကို အခြိနျပေးခွငျးလောကျ ပြျောစရာကောငျးလိမျ့မညျမဟုတျပေ။ ယခုတှငျလညျး အသကျ၃၁နှဈအရှယျရှိ မစ်စတာဖနျခါ့ထရှနျဆိုသညျ့ အမြိုးသားဟာ ထရပျကားတဈစီးလုံးကို စိတျတိုငျးကဖြနျတီးပွီး အိမျတဈလုံးကို ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျတှငျ … Read more
ရန်ကုန်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်ဝေသည့် မိန်ကလေးငယ်နှစ်ဦးကို ရဲက ဝါယာကြိုးဖြင့် ရိုက်နှက်
ရန်ကုန်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များ ဝေငှသည့် မိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးကို ရဲနှင့်စည်ပင်က ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဝါယာကြိုးဖြင့် မျက်နှာ၊ ခြေ၊ လက်များကို ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း တော်လှန်ရေး ဦး ဆောင် လူငယ်များထံမှ သိရှိရသည်။ ရန်ကုန်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁နာရီ လူငယ်များသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီး YBS ပေါ် ၊ ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေ ၊ ဈေး‌ တွေမှာ လူထုကိုလှုံ့ဆော်တာနဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေတဲ့ campaign တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ဘိုကလေးဈေးတွင် လူငယ် ၉ ဦးက ဝင်ရောက်ပြီး စာရွက်ဝေနေစဉ် စည်ပင်နှင့် အရပ်ဝတ်ရဲများ က လူငယ်များကို ၄၃ လမ်းဝိုင်းပိတ်ဖမ်းကြကြောင်း သိရှိရသည်။ “လက်ကမ်း‌စာစောင်ဝေပြီးတော့ လူငယ်တွေကို စည်ပင်တွေက … Read more